Lamuhla sitawubuka kwezimbangela eziyinhloko ukuhlanza kule ngane. Ukuze uqale, asichaze lesi simanga edabukisayo. Ukuhlanza ezinsaneni - a bokuphila isinyathelo ingane umzimba ziqondiswe Ukuhoxiswa ukudla kanye nezinye izinto by ukunyakaza reverse (antistalsis). Kufanele kukhunjulwe ukuthi ukubonakaliswa ukuhlanza ezinganeni - lena isenzo kuphela reflex (isinyathelo equlekile), nakuba kwezinye izimo ngenxa umzamo abantu abadala kungabangela esiswini like ukunyakaza.
Imbangela kuqala futhi ezivame kakhulu into enjalo njengoba ukuhlanza kule osanda kuzalwa kukhona kwezinso e pheshana emathunjini Nokho, akunjalo ngaso sonke isikhathi. Ngokwesibonelo, izinsana ngokuvamile inqubo regurgitation upotreblonnoy ukudla noma kunjalo akuyona zokugula esiswini. Lokhu kubonakaliswa kuyoboniswa nguMbusi kungenzeka ukuthi umataniswe nge phezu-ukudla, kodwa ngokuvamile kumane isici bokuphila. Uma ingane spits phezulu kancane, akusiyo isizathu kokungenela zokwelapha.
Esinye isizathu ukuthi imvamisa kuba endaweni yesibili - isifo samathumbu noma ukusabela iguliswa izithako zokudla ezithile (ubisi, ukudla aphelele). Uma inqubo ukuhlanza ingane yakho ephelezelwa ukuqubuka uncharacteristic, kufanele ngokushesha uthintane wabantwana, ngubani uzoqoka okunye ukwelashwa okuhloswe ngalo ukuqeda le komzimba.
Uma kuziwa izifo esiswini, izilinganiso ezifanele kuyoba ngokugcwele zincike kobukhulu isimo somntwana. Ngegciwane lula ukuntuleka proyavleniyv febrile kungaba ukuzola ekhaya (ngaphansi kweso udokotela).
Eziphuthumayo usizo lwezokwelapha siyadingeka uma ukuhlanza akagcini imijikelezo, umzimba emzimbeni nakakhulu, umntwana jikelele siya siba sibi kakhulu, izinga lokushisa emzimbeni liphuma khona. Ngokuvamile nezinkinga ezifana kumele ingane elaliswe esibhedlela. Ithiphu kubazali: musa ukumelana izinyathelo ezinjalo, ngoba ezikhathini eziningi, kutakhela uketshezi elahlekile kungenzeka kuphela ngokususa ukumnika ngqo ngokusebenzisa umthambo (ukuvuza). Indlela efanayo ukuqeda ukutheleleka kungenzeka wathela namanxusa elwa namagciwane.
Phela, ukuhlanza e umntwana osanda kuzalwa futhi abasha singenzeka ngaphansi ejwayelekile SARS ephelezelwa imfiva kanye ukudakwa jikelele umzimba.
Enye imbangela njalo ukuhlanza e izinsana kungaba stenosis pyloric, okuvela Isici esiswini (ngokunembile, pyloric yayo). Kulokhu, ukwelashwa okufanele wenziwa amasu kuhlinzwa kuphela incike ngobucayi isifo. Kodwa akufanele kudidaniswe stenosis pyloric kuyinto nibonakala pilorospazme ayefana kakhulu. Lapho pilorospazme kungekho ukudla ukwephulwa patency.
ukuhlanza ezinkulu e nosana - 'umthombo "- kungenzeka ezihlobene yokungavuthwa, noma ukulimala CNS (isimiso sezinzwa), ezivela ngesikhathi besakhulelwe noma lapho bebeletha kuhlulekile. Isazi sezinzwa sase kumele asize ziphathelene nalesihlava.
Futhi abangele emesis zingaba isifo (meningitis), noma ukuhlukumezeka okuholela ubuchopho ubuchopho (ukuxukuzeka). Kulokhu, lo ukuhlanza engalethi impumuzo oyifunayo (ingane ingavumi ukuzola ngemva kokuhlaselwa yinhliziyo), kodwa kubangela ubuhlungu obukhulu kuphela, ngoba, okokuqala, elihlobene ne ukuphazamiseka isikhungo ukuhlanza.
Ngezinye izikhathi kukhona ukuhlanza e izingane ezingaphansi konyaka, leyehlukile impilo enhle futhi wamukele okunomsoco. Lokhu kwenzeka ngenxa nesenzakalo zemizimba ketone, okuyinto isinyathelo ngqo kobuchopho kwengane (atsetonemicheskaya ukuhlanza). Lokhu kungase kube uphawu lwesifo sikashukela, kodwa ngokuvamile like ukuhlanza kwenzeka ngenxa ukusetshenziswa ngokweqile kwamafutha, okubangela kwamanyikwe bamane nje abakwazi ukuze kugayeke lezo zinto.
Futhi isizathu sokugcina ngoba ukuhlanza kukhona iziyaluyalu Neuro-zengqondo, ngokuvamile akunjalo kulula ukusingatha. NeMibandela okuvela iziqephu emetic kungaba zihluke kakhulu: kodwa omncane kunathi sonke umhlangano nomuntu ongamazi, akukho abazali; izingane ezindala - ukulangazelela, ukungafuni ukwenza lutho, ukwesaba. Ukusiza kulesi simo abizwa ngokuthi Neurology ezingane, hhayi hlungu kuyoba ngokuxhumana udokotela wezifo zengqondo ingane.
Ukuhlanza e ingane - uphawu esesabekayo ukuthi akunakugwenywa - njalo kudokotela ukuze kutholakale imbangela nenjongo ukwelashwa! Ukuzelapha kuyingozi kungadala nokuthi imiphumela ebuhlungu.
Phakathi ukuhlanza ungalokothi (!) Ungashiyi ingane yakho wedwa, bamba thwi futhi Hlambulula umlomo wakho nge amanzi abilisiwe.
Izifo isifo Gastroenteritis: ekwelapheni ngezimpawu izimbangela.
Izimpawu eyinhloko lezinkinobho
Ukubheja emasu basketball. Amaqhinga wokubuthelela "Basketball LIVE"
Indlela avuselele rose bese ugcine isixha fresh isikhathi eside
Indlela yokukhetha itafula ngaphakathi kwekhishi?
Ukusha Kwesibindi Kohlobo: Izimpawu. Into ebaluleke kakhulu
Kuyini iqhwa? Inkinga ikuphi-ingabe futhi uyini iqhwa?
Ingozi nokuzuza kuya inhlanzi umzimba
Indlela Yokukhetha Ifenisha ngemibuzo?
Quassia Amara uwina Rosacea futhi Induna